June 13, 2021 - Cele Fans
ဟိုတယ် အခန်း နံပါတ် (၃၉) ( မိန်းကလေးများ မဖတ်ရ )
June 13, 2021 Cele Fans Comments Off on ဟိုတယ် အခန်း နံပါတ် (၃၉) ( မိန်းကလေးများ မဖတ်ရ )
ဟိုတယ် အခန်း နံပါတ် (၃၉) (မိန်းကလေးများ မဖတ်ရ) ဖုန်းတွေမပေါ်သေးတဲ့ခေတ် အပြာကားတွေကို ဖုန်းထဲမှာ ကြည့်လို့မရတဲ့ ခေတ်မှာပေါ့…. အရပ်မြင့်မြင့် အသားဖြူဖြူ လူရည်သန့် လူငယ်တျောက် ဟိုတယ်ထဲကိုဝင်လာတယ်။ ကောင်တာရှေ့ရောက် ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် သူဌေးကိုမေးတယ်။ man – အခန်းနံပါတ် ၃၉ အားလား…..boss – အားပါတယ်ဗျ….man – ကျွန်တော်ယူလို့ရမလား… boss – ရတာပေါ့ဗျ….man – ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ… လူငယ်က […]
June 13, 2021 Cele Fans Comments Off on မှိုကြိုက်တတ်ရင် ဒါလေးတော့ဖတ်လိုက်ပါ။
မှိုကိုစမ်းသပ်ပုံ မှိုများရရှိသောအခါ အရိုးကိုလက်ဖြင့် ဖျစ်ကြည့်လျှင်ကြေမွသားလျှင် မစားကောင်းပါ။စားကောင်းသောမှိုများသည် ကြေမွသွားခြင်းမရှိပါ။ မှိုပေါ်သို့ ဆားအနည်းငယ် ဖြူးကြည့်လိုက်ပါ မည်းသွားလျှင် မစားရပါ။စားကောင်းသောမှိုသည် ဆားထိရုံနှင့် မည်းသွားလေ့မရှိပါ။ မှိုကိုလက်ဖြင့် ဖျစ်ကြည့်လို့ သွေးရောင်ပြောင်းသွားလျှင် မစားကောင်းပါ။စားကောင်းသောမှိုမှာ အရောင်မပြောင်းပါ။ မှိုကိုဓားဖြင့်ဖြတ်သောအခါ ပြာနှမ်းသွားလျှင် မစားရပါ။စားကောင်းသောမှိုမှာ မပြာနှမ်းပါ။ မှိုကို ဆားရည်တွင်စိမ်ကြည့်သောအခါ နက်လာလျှင် မစားကောင်းပါ။စားကောင်းသောမှိုမှာ မနက်ပါ။ အထူးသဖြင့် ခြေခြင်းပါသောမှိုများသည် မစားကောင်းပါ။စားကောင်းသောမှိုမှာ ခြေခြင်းပါလေ့မရှိပါ။ ————— မှိုနှင့်ရောစပ်မစားကောင်းသော အစာများ ၁။ […]
တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရေးတဲ့စာ
June 13, 2021 Cele Fans Comments Off on တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရေးတဲ့စာ
ငိုမနေနဲ့ လူတွေသေနေပြီ”” ထ”” ဘယ်အရာမဆို မထိုးဖောက်ပဲ ငြိမ်နေရင် ငြိမ်တဲ့နေရာ သေရမှာပဲ😎 အလှည့်မြန်တာနဲ့ အလှည့်နှေးတာ ကွာမယ် သေကိုသေရမှာ အာဏာရှင် မှန်သမျှ ဘယ်ပြည်သူ့အတွက်မှ မပါတာသေချာတယ် ဒီတော့ မင်းဘာလုပ်မလဲ😎 ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းမှု့တွေ ကြုံလာရချိန်တိုင်း နောက်ဆုတ် ထွက်ပြေးဖို့ စဉ်းစားမိတဲ့အခါ တွေး မိတာက ငိုမနေ နဲ့ လူတွေ သေနေပြီ မင်းပြန်ထ ဆိုတဲ့အတွေး👍👍 ငါတို့လည်း လူပါ သွေးနဲ့ကိုယ်အသားနဲ့ကိုယ် […]
June 13, 2021 Cele Fans Comments Off on ပေးစရာရှိတဲ့အကြွေးတွေအားလုံးကျေပြီး စီးပွားရေးတွေတဟုန်ထိုးတက်လာစေတဲ့လောကီနည်းပညာ
လောကမှာမချမ်းသာချင်တဲ့သူမရှိသလို အကြွေးတွေနဲ့တချိန်လုံးပူပင်သောကရောက်နေကြရတဲ့ ဘဝမျိုးမှာလည်း နေချင်ကြမယ်မထင်ပါ။လူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါလောကဓံရဲ့ အဆိုးအကောင်းဒဏ်ကိုတော့ မည်သူမဆိုမလွှဲမသွေကြုံကြရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အတိတ်ကံကိုတော့ဘုရားရဟန်းမှတပါး မည်သူမျှကြိုမသိနိုင်ပါ..သို့ပေမဲ့အတိတ်ကံကိုပဲအားကိုးနေလို့မရသလို အတိတ်ကံကိုပဲရိုးမယ်ဖွဲ့အပြစ်တင်နေလို့လည်းပြီးမယ်မထင်ပါ ဒါကြောင့်မို့လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်မှာလည်း ကိုယ်စွမ်းသလောက် ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားရုန်းကန်ကြရတာမို့ အကြွေးကျေစီးပွားတက်လာဒ်ရွှင်စေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးမျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ အကြွေးဆပ်ချင်သော်လည်း အခက်အခဲအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြန်လည်၍မဆပ်နိုင်သောသူများ အကြွေးပူမိနေသူများဤနည်းလမ်းကိုပြုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။လိုအပ်တာတွေကတော့ ပန်းကန်တစ်ချပ်၊ကွမ်းရွက်တစ်ရွက်၊သံပုရာသီးတစ်လုံး တို့ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ရမှာက ပထမဦးဆုံးပန်းကန်တစ်ချပ်ပေါ်တွင် အညှာချွေထားသောကွမ်းရွက်တစ်ရွက်ကိုတင်ပါ။ သံပုရာသီးတစ်လုံးကို နှစ်ခြမ်းခြမ်းပြီး အဲ့ဒီကွမ်းရွက်ပေါ်တွင်သံပုရာသီးခြမ်းကိုတင်ပါ။အစီအရင်ပြုလုပ်ထားသောပန်းကန်ပြားကို မိမိအိမ် ဘုရားဆင်တွင်ကပ်လှူထားရပါမယ်။ သောက်တော်ရေ တစ်ခွက်၊ ဖယောင်းတိုင်ငါးတိုင်၊ အမွှေးတိုင် ငါးတိုင် ထွန်းညှိ ပူဇော်ပြီး… “သိဒ္ဓိ […]
မိန်းခလေးတိုင်း သိထားသင့်ထားပါတယ် . . (ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည်မျှဝေပေးကြပါနော်)
June 13, 2021 Cele Fans Comments Off on မိန်းခလေးတိုင်း သိထားသင့်ထားပါတယ် . . (ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည်မျှဝေပေးကြပါနော်)
အမျိုးသမီးမိန်းကလေးများသတိပြုမိစေရန်ကျေးဇူးပြုပီးသင်သိသောအမျိုးသမီးများကိုမျှဝေပေးပါ(သင် သည် အမျိုးသားတစ်ယောက် ဆိုပါကယခု အကြောင်းရာအားအမျိုးသမီးများအတွက် မျှဝေပေးပါ)အမျိုးသမီးများရာသီကာလ အတွင်းအောက်ပါအချက် များမလုပ်သင့်ပါဒါတေကတော့ ၁။ရာသီချိန်ကာလအတွင်း ရေခဲရေ ၊ဆိုဒါ မသောက် သုံးသင့်သလို အုန်းသီးလဲ မစားသင့်ပါ။သုတေသီများ၏လေ့လာချက် များအရ ရာသီကာလအတွင်းရေခဲရေသောက် သုံးးခြင်းသည်သားအိမ်တွင်းကျန်ရှိနသောရာသီသွေးကိုခဲစေတက်ပီး ၅နှစ် မှ ၁၀ နှစ် အတွင်းအကြိမ်ရေများလာသည့်အခါသားအိမ်ကင်ဆာအကျိတ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၂။ အမျိုးသမီးများရာသီချိန်ကာလအတွင်း ခေါင်းလျှော်ခြင်းမပြုသင့်ပါ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရာသီချိန်ကာလအတွင်း ဦးခေါင်း၏ချွေးပေါက်ငယ် လေးများပွင့်နေတက် ပြီးခေါင်းလျှော် လိုက် ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုကျယ် သွားစေကာ ဦးခေါင်းအတွင်းပိုင်းကို လေတိုက်ရိုက် […]
ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ဗိုက်ထဲမှကလေးလေးကိုတောင် မမြင်လိုက်ရရှာပဲမိသားစုဆီကို ဘယ်တော့မှပြန်မလာနိုင်ရှာတော့တာ (၃) လပြည့်သွားပြီဖြစ်သော သူရဲကောင်းအကို
June 13, 2021 Cele Fans Comments Off on ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ဗိုက်ထဲမှကလေးလေးကိုတောင် မမြင်လိုက်ရရှာပဲမိသားစုဆီကို ဘယ်တော့မှပြန်မလာနိုင်ရှာတော့တာ (၃) လပြည့်သွားပြီဖြစ်သော သူရဲကောင်းအကို
ပြည်သူတွေကတော့ ဒီကာလမှာအသ.က်ပေးသွားရတဲ့သူရဲကောင်းတွေအတွက်ဘယ်တော့မှအားမလျော့ကြဘဲရောင်နီသာတဲ့နေ့သစ်ဆီရောက်အောင်ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းက စည်းစည်းလုံးလုံးရှိကြပြီးအကူအညီလိုအပ်နေသူတိုင်းအတွက်လည်းအဆင်သင့်ရှိနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဆုံ.းရှုံ.းလိုက်ရတဲ့ကျ.န်ရ.စ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ နေ့တိုင်းသတိရနေပြီးပူဆွေ.းသောကရောက်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လ (၁၁) ရက်နေ့က မြောက်ဒဂုံမှာ ကျဆုံ.းသွားတဲ့ ကိုချစ်မင်းသူကတော့မိသားစုကိုခွဲခွါသွားခဲ့တာ (၃)လပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကတော့ကိုချစ်မင်းသူပြောခဲ့တဲ့ “မိန်းမရယ်ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ ဒီနေ့ငါမထွ.က်လို့ငါ့လိုလူတွေများရင်ဒီနိုင်ငံကြီးဒီမိုကရေစီမရတော့ဘူး” လို့ နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကို အခုချိန်ထိဦ.းနှော.က်ထဲမှာစွဲမြဲစွာမှတ်မိနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုချစ်မင်းသူရဲ့ ဇနီးကကိုယ်ဝ.န်ဆော.င်ထားရတဲ့အပြင် (၂) နှစ်အရွယ်သမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့ ကျ.န်ရ.စ်ခဲ့ရှာတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုချစ်မင်းသူရဲ့ဇနီးကို စေတနာရှင်ပြည်သူတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြကာအားပေးစကားတွေလည်းပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကဇွန်လ (၁၁) ရက်နေ့မှာကိုချစ်မင်းသူကျဆုံးသွားတာ (၃) လပြည့်ပြီဖြစ်လို့ ပြည်သူတွေကသတိတရနဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှစာလေးတွေရေးတင်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာအသ.က်ပေးသွားရတဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို ပြည်သူတွေကလည်းဘယ်တော့မှမမေ့ဘဲ […]
အတိတ်ကောင်းနိမိတ်ကောင်း . .ဘုရားတည်နေသော ဘုရားဝန်းအတွင်း တမာပင်မှ ထူးဆန်းစွာ သကာရည်များ ထွက်ရှိနေ (ရုပ်သံ)
June 13, 2021 Cele Fans Comments Off on အတိတ်ကောင်းနိမိတ်ကောင်း . .ဘုရားတည်နေသော ဘုရားဝန်းအတွင်း တမာပင်မှ ထူးဆန်းစွာ သကာရည်များ ထွက်ရှိနေ (ရုပ်သံ)
ဘုရားတည္ေနေသာ ဘုရားဝန္းအတြင္း တမာပင္မွ ထူးဆန္းစြာ ခ်ိဳျမေသာ သကာရည္မ်ား ထြက္ရွိေန (႐ုပ္သံ) ဇန္နဝါရီ(၃) AlinnMyay(အလင္းေျမ) မႏၲေလးတိုင္း၊ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ႀကီးေက်း႐ြာ၊ မိုးေကာင္းေက်ာင္းတိုက္၊ အတုမရွိေ႐ႊသာေလ်ာင္းဘုးရားဝန္းအတြင္း တမာပင္မွ ခ်ိဳျမေသာ သကာေရမ်ား ထြက္ရွိေနၿပီး လာေရာက္ ၾကည့္ရႈသူမ်ား မ်ားျပားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သတင္း/႐ုပ္သံ-ႏိုင္လင္း AlinnMyay(အလင္းေျမ) ျပည္သူ႔ကူညီေရး ျပည္သူ႔အသံေဖာ္ေဆာင္ေရး သတင္းမွန္မီဒီယာ ——————— ဘုရားတည်နေသော ဘုရားဝန်းအတွင်း တမာပင်မှ ထူးဆန်းစွာ ချိုမြသော သကာရည်များ […]
ဝါယာရှော့မီးဘေး မဖြစ်ရအောင် လူတိုင်းသိထားသင့်သည့်အရာများ
June 13, 2021 Cele Fans Comments Off on ဝါယာရှော့မီးဘေး မဖြစ်ရအောင် လူတိုင်းသိထားသင့်သည့်အရာများ
ကျွန်တော့်အတွေ့ကြုံနှင့် သိသလောက်ရှင်းပြပါမည်။ တိုးတက်လာသော လူနေမှုအဆင့်တန်းများ၏ အဓိက သော့ချက် တစ်ခု ဖြစ်သော အိမ်တွင်း လျှပ်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ များပြားစွာ ယခုနှစ်များအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာပါသည်။ ယခင်က မိမိအိမ်တွင် သွယ်တန်းထားသော မီးကြိုးများ၏ခံနိုင်ရည်ထက် ယခုအိမ်တစ်အိမ်အတွင်းသုံးစွဲနေသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ Loadက ပိုများနေသည်ကိုသတိမထားမိကြပါ ။ မျိုးစုံသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုသာ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဝယ်ယူကြပြီး အိမ်အတွင်း သွယ်တန်းထားသော မီးကြိုးများကိုလဲရန် မည်သူမျှ စိတ်မဝင်စားကြပါ။ ပလပ်ပေါက်ရှိရင် ထိုးပြီးအသုံးပြုလို့ရသည်ဆိုသော အတွေးများသာ […]
မိန်းကလေးတွေမှာ ညှို့ချက် (၈) ချက်ရှိသတဲ့ . . . . .
June 13, 2021 Cele Fans Comments Off on မိန်းကလေးတွေမှာ ညှို့ချက် (၈) ချက်ရှိသတဲ့ . . . . .
ညှို့ချက်နံပါတ် (၁) တချို့မိန်းကလေးတွေက သူတို့မျက်နှာလေးတွေကို ချိုချိုကလေးလုပ်ထားတတ်ကြတယ် အဲဒါက ယောက်ျားလေးတွေကို ဆွဲဆောင်ယူတဲ့ ညှို့ချက်နံပါတ်တစ်ပဲ “သိတံ” လို့ခေါ်တယ်။ (၂) တချို့မိန်းကလေးတွေကြတော့ အသံတိုးတိုးကလေးနဲ့ရယ်ပြတတ်တယ် “ဟာသ” လို့ခေါ်တယ်။ (၃) တချို့မိန်းကလေးတွေကျတော့ ယောက်ျားတယောက်ရှေ့မှာ ကြောက်ပြ စိုးရိမ်ပြ ထိတ်လန့်ပြတတ်တယ် “ဘယ” လို့ခေါ်တယ်။ (၄) တချို့မိန်းကလေးတွေကျတော့ လျှာလေးတစ်လစ်တစ်လစ်ထုတ်ပြတတ်တယ် ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဟန် လုပ်ပြတတ်တယ် “လဇ္ဇ” လို့ခေါ်တယ်။ (၅) တချို့မိန်းကလေးတွေက စကားပြောတဲ့အခါ မကြားတကြားဖြစ်အောင်လုပ်ပြောတတ်ကြတယ် […]
သင့်အကြောင်းနဲ့အကျင့်စရိုက်ကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်း
June 13, 2021 Cele Fans Comments Off on သင့်အကြောင်းနဲ့အကျင့်စရိုက်ကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်း
၁။ ဆံပင်အရောင် ရွှေဝါရောင်ဆံပင်ပိုင်ရှင်များက အခြား ဆံပင်အရောင်ပိုင်ရှင်များထက် လူအများ အာရုံစိုက်မှု ပို ခံရပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ပိုရှိကြပါတယ်။ ဆံပင်နီကျင်ကျင်ပိုင်ရှင်များက အခြားသူများထက်နာကျင်မှုကို ပို ခံစားရလေ့ရှိသောကြောင့် ခွဲစိတ်ကုသရာတွင် ထုံဆေး ပိုသုံးရန်ပိုလိုအပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အမျိုးသားများတွင်IQ ၁၁၉ ရှိသူများသည် IQ၁၁၅ ရှိသူများထက်ပို၍ ထိပ်ပြောင်လွယ်လေ့ရှိပါတယ်။ ၂။ မျက်နှာ မျက်နှာ ပြင် ကျဉ်းသော အမျိုးသားများသည်ရိုးသားပွင့်လင်းကြပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ကျယ်သော အမျိုးသားများသည် လိမ်ညာ လေ့ရှိပြီး […]